Free Download Adobe Dreamweaver CS6 u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Adobe Dreamweaver CS6 u Mac
Adobe Dreamweaver waa codsi design web iyo horumarka aad loo jecel yahay abuuray by Macromedia. Waxa ay taageertaa labada Mac iyo Windows ka hawlgala nidaamyada. Waa barnaamij kuu saamaxayaa inaad sameyso oo websites edit HTML iyo barnaamijyada moobiilllada. Waxay bixisaa aragtida Design oo editor code in uu leeyahay muuqaalada caadiga ah, oo ay ku jiraan Saan muujinayo dhamaystirka code, code burburto, waqtiga dhabta Saan jeegga iyo ka badan ah. Version ugu dambeeyay, Adobe Dreamweaver CS6 ayaa ka hadlay dhowr arrimood oo Dreamweaver FTP oo ku daray qaar ka mid ah qaababka cusub.
Adobe Dreamweaver CS6 taageertaa dadka isticmaala in la beddelo guryaha CSS soo galeen animation saamaynta diinta, taas oo ka dhigaysa lifelike design internetka. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad sii gacanta sax ah design bogga internetka marka aad la bogga internetka xubno ka qabtaan iyo in la abuuro saamaynta cajiib ah.
Updated-waqtiga dhabta ah view
"Aragtida Real-time" hadda la isticmaalayo nooca ugu dambeeya ee engine qaab beddelidda WebKit, kaas oo taageeri kara HTML fiican.
Guddi Falanqeynta multiscreen Updated
Adobe Dreamweaver CS6 isticmaala guddiga Falanqeynta multiscreen updated si loo hubiyo loox bandhigay mashaariic aasaasay telefoon smart, kiniin iyo desktop-ka.
Adobe Dreamweaver CS6 waa codsi aad loo jecel yahay oo awood leh oo loo isticmaalo design internetka iyo horumarinta. Sababtoo ah ay interface muuqaal dareen leh, waa mid aad u fudud dadka isticmaala si ay u sameeyaan iyo websites edit HTML iyo barnaamijyada moobiilllada. Waxay abuuri karaan websites iyo naqshado casriga ah, desktop, kiniiniyada iyo qalab kale.
Adobe Dreamweaver CS6 bixisaa aragtida Design ah oo editor code si ay u caawiyaan dadka isticmaala code qori ah. View Design waxa uu ka dhigayaa mid aad u habboon in la qorsheeyo khariidad si degdeg ah. Waxay kaa caawin karaan dadka isticmaala abuuro oo isku dubaridi khariidad ee xubno HTML si deg deg ah. By isticmaalaya FTP, SFTP, ama WebDAV, Dreamweaver edit karaa files degaanka ka dibna u geliyaan si ay u server web fog.
Version ugu dambeeyey ayaa horumar qaar ka mid ah. Tusaale ahaan, arrimaha Dreamweaver FTP sheegay by macaamiisha waa laga hadlay. CSS3 kala guurka ayaa sidoo kale hadalkiisa ku daray. Waxa kale oo ay taageero jQuery Mobile ayaa la kordhiyay oo aad ka heli karto war dheeraad ah oo ku saabsan Dheecaan Grid Layout.
Wadaagista Videos on vimeo: Talooyin iyo tabaha
6 Inta badan faa'iido leh Adobe jilitaankii Talooyin wanaagsan Video Faalladaada